Home Wararka MW Mustafa Cagjar: “Beelaha Direed ha ku mashquulaan Jabuuti iyo Somaliland oo...
MW Mustafa Cagjar: “Beelaha Direed ha ku mashquulaan Jabuuti iyo Somaliland oo faraha ha kala baxaan Ogaden” (Warbixin-Video)
Madaxweynaha Ismaamulka Degaanka Soomaalida ee Itoobiya Mudane Mustaf Cagjar ayaa si caro ku jirto uga hadlay Shirka Beelaha Direed ee ka socda magaalada Addis Ababa.
MW Mustafa oo wareeysiyo kala duwan siiyay idaacado muqaal iyo aragti ah ayaa sheegay in shirk ka socda magaalada Addis Ababa uusan khuseynin degaanka Soomaalida. Waxaana uu ku tilmaamay shirkaas mid ay isugu yimaadaan kooxo dano gaar ha leh oo ka socda Jabuuti iyo Somaliland.
Waxa uu yiri “marnaba ma yeeleyano in beelo gaar ah ay shiraan iyaga oo ka wakiil ah meelo kale oo ku nool dalal kale”.Waxa uu intaas ku daray “Beelaha Direed waa in ay ku mashquulaan Jabuuti iyo Somaliland oo ay faraha kala baxaan Ogaden”
Hadalka ka soo yeeray MW Mustafa ayaa u muqda mid uu arka shirka Beelaha Direed mid caqab ku ah maamulkiisa gaar ahaan beelaha Ogaden oo isaga soo doortay.
Waa markii ugu horeeysay oo beelaha Direed ay yeeshaan shir lagu raadinaayo midnimad beelaha Direed. Shirkaas ayaa waxa uu ka abuuray guud ahaan deegaanka Soomaalida iyo wadamada dariska la ah Itoobiya dareen kacdoon oo ay beelaha Dir ku muujinayso awoodeeda siyaasadeed.
Beesha Direed ayaa ah beesha ugu dadka badan marka loo fiiriyo qoowmiyadaha Soomaalida ee ku dhaqan Geeska Africa hadana waxa awoodooda siyaasadeed ay ku kooban tahay dalalka Jabuuti iyo Somaliland. Shirkaan ayaa u muuqado mid u muujiyay shacabka Direed in hadii ay isku geeyaan awoodooda siyaaseed iyo tan dhaqaale ay noqon karaan cudud saameyn ku yeelata geedi socodka siyaasada Itoobiya ee hadda jirta iyo guud ahaan mustaqbalka Geeska Afrika.
Hadaba maxaa keenay in MW Mustaf Cagjar uu dagaal ku qaado shirka beelaha Direed ee ka dhacaya magaalada Addis Ababa maxaase uga lumaya isaga iyo xukuumadiisa.
Beesha Ogaaden ayaa waxa in mudo ah gacanta ku haysay awooda siyaasadeed ee degaanka Soomaalida inkastoo ayan ahaynin dadka ugu tirade badan ee ku dhaqan deegaankaas
Doorashada Madaxweynaha Maamulka ee Mustafa Cagjar ayaa waxa soo doortay beesha Ogaaden oo kali ah iyada oo aan talo badan ka galin guud ahaan shacabka ku dhaqan dhulka Deegaanka Soomaalida.
MW Mustafa ayaa inta aan loo magacaabin MW Ismaamulka degaanka waxa uu ka mid ahaa gudiga beesha Ogaden oo ka koobnaa xildhibaanada Ogaden ee ka soo jeeda sadaxda wadan ee Kenya, Soomaaliya iyo Itoobooya; Aqoonyanaho, ganacsato iyo aqoon yahano
Magacaabistiisa ayaa waxa ay ku timid ka dib markii isaga loo gartay in beesha Ogaden ee aan hogaanka ku lahaynin dalalka Kenya, Itoobiya iyo Soomaaliya laga soo magacaabo Madaxweyne si beelaha Ogadeen ee ku dhaqan sadaxdaas dal ay u helaan sinaan dhanka awood qeybsiga. Tani ayaan keentay in beesha uu isaga ka soo jeedo loo magacaabo Madaxweynaha Ismaamulka Soomaalida
MW Mustafa ayaa hadalkiisa carada iyo xanafta leh u muuqda mid muujinayo in beesha Ogaaden ay la soo daristay cabsi la xiriirta xajinta awooda dhaqaale iyo mida ciidan ee ay ku leeyihiin degaanka Ismaamulka Soomaalida.
Dhanka kale ururka ONLF ayaa isagana lagu sameeyay hub ka dhigis buuxda taas oo abuuraya in shacabka iyo qabaa’ilada ku dhaqan dhulka Soomaalida ay helaan fursad ay si dimoqoraadi ah u soo dortaan hogaan cusub kaas oo ka tarjuma danaha dadka ku dhaqan degaanka iyada oo aan la fiirinaynin qabiil iyo awood sheegayo cid gaar ah sheegato.
Dhanka kale MW Mustafa Cagjar ayaa waxa uu magaalada Jijiga ku so dhaweeyay oday dhaqameedyo beelaha Daarood ee ka soo jeeda Puntland iyada oo ujeedadu ahayd in xal loo helo dagaala ka socday degaanka Sool iyo Sanaag. Mar hadii uu soo dhaweynayo odayaasha beelaha Daarood maxaa u diiday in uu si la mida uu u soo dhaweeyo dadka ka jeeda beelaha Direed madaama uu madaxaweyne u yahay labada beelood.
Waxaan shaki ku jirin in hadalka xanafta leh ee ka soo yeeray MW Mustaf uu sii adkeyn doono isku soo dhawaanshaha beelaha Direed. Waxaa lama huraan ah in MW Mustafa uu ka shaqeeyo in uu shacabka isku soo dhaweeyno inta uu u kala qaybin lahaa Qabiilo taas oo keeni doonto dagaal beeloodyo hor leh oo ka dhaca dhulka Soomaalida.
Halkaan ka daawo wareysigii uu shalay bixiyay Mustaf Cagjar
Halkaan ka daawo kulankii uu Madaxweyne Mustaf la yeeshay beesha Darood dabayaaqadii sanadkii hore: